Tabaha ugu wanaagsan ee looga faa'iideysto Xiaomi Mi A1 | Androidsis
Eder Ferreño | | Khiyaamada Android, Tababarada, Xiaomi
Xiaomi wuxuu noqday mid kamid ah noocyada ugu muhiimsan ee suuqa. In kasta oo xaqiiqda ah in ilaa dhowaan ay si rasmi ah ugu iibin jireen Aasiya, haddana waxaa loo dhigay inay ka mid noqdaan kuwa ugu iibsiga badan adduunka. Hadda waxay bilaabeen inay ku iibiyaan suuqyo cusub, iibintooda ayaa sii socon doonta. The bilaabida aaladaha sida Xiaomi Mi A1 Sidoo kale way caawisaa.
Waa taleefan aad muhiim ugu ah shirkadda. Maaddaama ay ku saabsan tahay marka hore inaad yeelato Android One. Marka taleefanka ayaa ka tagaya MIUI wuxuuna doortaa Android saafi ah. Daqiiqad fure u noqon kara shirkadda. Sidaas, Waxaan kaaga tageynaa xeeladaha ugu fiican ee tan Xiaomi Mi A1.
Un taleefan leh awood badan sida tan oo kale waxay mudan tahay in si buuxda looga faa'iideysto. Taasi waa sababta aan kuugu keeneyno taxane taxane ah si aad uga faa'iideysato tan Xiaomi Mi A1. Diyaar ma u tahay inaad la kulanto?
1 U isticmaal taleefankaaga kontoroolka fog
2 Adeegso tilmaamaha
3 Quful barnaamijyada leh dareeraha faraha
4 Adeegso raadiyaha FM-ka
5 Cufnaanta beddel
6 Khiyaano dheeraad ah
U isticmaal taleefankaaga kontoroolka fog
Waa shaqo aad u xiiso badan oo aan ugu baahanahay codsi. Karaa qalabka u rogo koontarool fog oo caalami ah in aan ku isticmaali karno aalad kasta oo kale. Laga bilaabo laga beddelo kanaallada TV-ga ilaa kor u qaadista mugga qalab kale. Marka waxay noqon kartaa mid waxtar badan.
Ku filan soo dejiso barnaamij la yiraahdo Mi Remote. Waad ku mahadsan tahay, dareeraha infrared-ka ee Xiaomi Mi A1 waa laga faa'iideystay oo sidaas ayaan qalabkan ugu beddeleynaa a gacanta fog hab aad u fudud.
Mi Remote xakamaysada - TV, STB, AC iyo inbadan
Waan awoodnaa u isticmaal dareeraha sawirka faraha ee Xiaomi Mi A1 waxyaabo badan. Inbadan oo aan ka fikirno. Maaddaama ay shaki la’aan tahay hab loo adeegsado tilmaamaha. Waxaan soo bandhigi karnaa ogeysiiska. Kaliya hoos u dhig fartaada oo toos ayey u soo bixi doontaa. Si aad awood ugu yeelatid ikhtiyaarkan waa inaad marin u heshaa dejinta oo xulo xulashada mari ee ogeysiisyada. Sidan ayaad horeyba ugu raaxeysan kartaa.
Quful barnaamijyada leh dareeraha faraha
El Dareemaha faraha taleefanka ayaa loo isticmaali karaa waxyaabo badan sidaan horeyba kuugu sheegnay. Mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan ayaa ah quful ama furo barnaamijyada. Si tan loo sameeyo waxaan si fudud ku rakibeynaa codsi noo oggolaanaya inaan tan ku qabanno qaab aad u fudud. Waxaa jira barnaamijyo yar oo la heli karo si loo joojiyo barnaamijyada. Laakiin, haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan isticmaalno shidma faraha si loo xiro barnaamijyada, mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee lagu rakibo Xiaomi Mi A1 waa AppLock.
Developer: Shayga-Doonta Lab
Adeegso raadiyaha FM-ka
Este Xiaomi Mi A1 malahan raadiyaha FM, inkasta oo tani aysan ahayn wax dhib ah, maaddaama ay jirto hab lagu awoodo in lagu dhageysto raadiyaha FM-ka iyada oo aan loo baahnayn in la rujiyo ama la isticmaalo xogta moobiilka. Waa a taxane ah oo talaabooyin aad u fudud laakiin anaga sidee ah idaacada haku raaxeysato:
Waxaan fureynaa arjiga taleefanka
Gali lambarka * # * # 6484 # * # *
Liiska ayaa soo baxa oo waxaan u jiidaynaa dhamaadka
Waxaan dooranaynaa xulashada FMRadio
Waxaan isku xireynaa dhagaha
Waxaan doorannaa inta jeer ee aan rabno inaan dhageysano
Waxaan horey u dhageysan karnaa raadiyaha
Dhibaatada ugu weyn ee doorashadan waa taas haddii aan ka baxno shaashadda, dib u ciyaarista ayaa la joojinayaa. Laakiin haddii kale waxaan horeyba ugu raaxaysan karnaa Idaacadda FM on our Xiaomi Mi A1 hab cadaalad fudud.
Inaan beddelno cufnaanta macnaheedu waa tan xaddiga maaddada lagu soo bandhigo shaashadda. Waxaan markaa arki karnaa waxyaabo badan ama ka yar oo ku xiran waxa aan go'aansanno. Si taas loo sameeyo waa inaan tag setinka ka dibna shaashadda. Halkaas, waxaan fursad u leenahay kordhin ama hoos u dhig cufnaanta.
Adoo hoos u dhigaya cufnaanta, waxyaabo badan ayaa laga arki karaa shaashadda. Haddii waxa aan sameynayno aan kordhino, wax walba waxay u muuqan doonaan wax ka sii weyn waxayna noqon doontaa mid aad u raaxo badan oo awood u leh akhrintiisa. Waxay kuxirantahay dookhaaga inaad doorato hal ikhtiyaar ama mid kale.
Khiyaano dheeraad ah
Baro sida loo rakibo Mawduucyada Xiaomi on your casriga ah si buuxda u astaysto.
Tani waa xulashadayada khiyaanooyinka si aan uga faa'iideysanno 'Xiaomi Mi A1'. Waxaan rajeyneynaa in tabahaani ay waxtar kuu leeyihiin. Maxay kula tahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Tabaha ugu fiican ee loogu talagalay Xiaomi Mi A1
Iyo inaad awood u yeelatid inaad wax uhesho shaashadda aan mugga ahayn oo lagu daro badhanka badhanka ???
Galab wanaagsan, hadda waxaan iibsaday Xioami Mi A1, waana ku faraxsanahay. laakiin dhibaato ayaan qabaa gariirka waa mid aad u daciif ah, ma jirtaa waddo lagu kordhiyo xoogga gariirka. app ka mid ah oo fuliya.
Mahadsanid iyo maalin farxadeed.
Nagu Saabsan dijo
Waxaan haystaa A1 oo waxaan ku furayaa faraha iyo sidoo kale biinka, sikastaba ha ahaatee toos u helitaanka kamarada waa la furi karaa iyada oo aan loo baahnayn sawirka faraha ama biinanka
Ku jawaab Yop